Nabdoon Ergada ka mid ahaay, oo xalay lagu dilay Muqdisho?
13 November, 2017 in Wararka by BANA Mogdishu Office
Kooxo hubaysan oo ka tirsan Ururka Al-shabaab ayaa xalay waxa ay Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho ku dileen Nin Oday ahaa oo ka tirsanaa Ergadii Maamulka Hirshabeelle ee xildhibaanada ku soo doortay magaalada Jowhar.
Kooxda dilka geysatay ayaa Nabadoonka waxa ay ka toogteen qeybaha sare ee jirkiisa, kadibna waxa ay ka baxsadeen goobta, kahor inta aysan halkaasi soo gaarin Ciidamada Ammaanka Dowladda Federaalka.
Xasan Jaciir ayaa lagu magacaabi jiray Nabadoonka xalay lagu dilay Suuqa Bakaaraha, sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah, oo qaarkood la hadlay warbaahinta gudaha.
Ciidamada Ammaanka Dowladda Federaalka ayaa baaritaano la xiriira sida uu dilka u dhacay iyo sidii looga daba tegi lahaa raggii dilka geystay waxa ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Howlwadaag, inkastoo ilaa hadda aanan la sheegin cid loo soo qabtay dilkaasi.
War Shabaabka ay ku soo qoreen baraha ay wararkooda ku faafiyaan ayay ku sheegteen masuuliyadda dilkan, iyaga oo sidoo kale tilmaamay in Oday Jaciir maalmihii dambe uu ku howlanaa diyaarinta rag ilaalo u noqda Haweenay xildhibaanad ah oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay inay sii kordhinayaan beegsiga ay ku hayaan Odayaashii ka qayb galay Doorashooyinkii Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ee Gobolada dalka Soomaaliya ka dhacay.
DEG DEG: Ganacsade lagu dilay Boosaaso Aabihiisna la dhaawacay
Dad shacab ah oo lagu rasaaseeyay Ceelasha Biyaha!!
Jubaland oo dil ku fulisay Askari Bishii la soo dhaafay Nabaddoon ku dilay Kismaayo
Madaxweyne Muuse Biixi oo lagu soo dhaweeyey Berbara
Wariye ku sugan Jariiban oo Tooreey lagu dhaawacay
Ciidamo cusub oo lagu wareejin doono Amaanka Muqdisho!
Askari Ka Tirsanaa AMISOM oo Lagu Dilay Magalaadda Muqdisho!!
Ciidamada Puntland oo lagu qarxiyay Gobalka Barri
Gudigga Doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed oo maanta lagu wado in la shaaciyo
CIA:"Amarka lagu dilay Wariye Kashoggi waxaa bixiyay Amir Maxamed Bin Salmaan".
the background of the new autonomy president Visits: 666961
What 9 World Leaders Were Doing in Their 20s Visits: 42272
Somalia Lost a Career Diplomat, Veteran Politician, Prolific Writer and Pan-Somalist Visits: 37966
Walaalkiisa Dile Oo Maanta Mansab Doon Ah Visits: 32968
54 Sano Kadib Maxaa Keeney In DM Ay Taagnaadaan Meeshii Ay Joogeen 1960 Visits: 27926
DEG DEG: Madaxweynaha Dalka Eritrea Oo Soo Gaaray Magaalada Muqdisho Visits: 116
Akhriso: Ujeedka Booqashada Madaxweynaha Eritrea Isias Afawarki Ee Muqdisho Visits: 288
Wadooyinka Muqdisho oo Maanta xiran Visits: 42
Qaban qaabadda soo dhaweynta Madaxweynaha Eritrea Visits: 58
DHAGEYSO: Taliska Booliska K/Galbeed oo u Hanjabay Shacabka Baydhabo Visits: 334